Knowledge - Myanmar Automobile and Equipment Directory
Monday, 25 March 2019 13:49
ကားနံပါတ်ပြားအသစ်တွေမှာပါလာတဲ့ QR ကုတ်လေးတွေကဘာအတွက်လဲ
QR ပါဝင်လာတဲ့ အဓိကကြောင်းကတော့ လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းတိုးမြင့်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ အခုကအတုတွေလိုက်လုပ်တဲ့ခေတ်လေ။
Monday, 25 March 2019 13:40
ကားနံပါတ်တွေ 5Q ထိပဲရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာ 9V ဆိုတဲ့ကားနံပါတ်က ဘယ်လိုရလာပါသလဲ
လက်ရှိကားနံပါတ်တွေဟာ 5Q ထိပဲထွက်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ 9V တွေ 8V ကားနံပါတ်တွေကတော့ လမ်းမပေါ်မှာတွေ့နေရပါပြီ။
Monday, 25 March 2019 11:54
ကားတစ်စီးမှာ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းလို့ဆိုရမယ့် အင်ဂျင်တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ အားလုံးရိပ်စားမိနိုင်ပါတယ်။
Saturday, 23 March 2019 13:45
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားများ၊ သက်တမ်းနှင့် လိုင်စင်ပြုလုပ်ရာတွင်လိုအပ်သည့်အရာများ
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပြုလုပ်ရာတွင် သိထားရမည့် လိုအပ်ချက်များ.....
Saturday, 23 March 2019 11:16
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဝင်းမှ ကားဂိတ် ဖုန်းနံပါတ်များ
အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကားဝင်းမှ ကားဂိတ်ဖုန်းနံပါတ်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.....
Saturday, 23 March 2019 10:56
Light Truck နဲ့ အမြန်လမ်းပေါ် မောင်းနှင်မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေသိထားဖို့လိုတယ်နော်
၈.၄.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ Ligh Truck ယာဉ်များသည် အောက်ပါအချက်အလက်များ မပြည့်စုံပါက အမြန်လမ်းပေါ်ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခွင့်မရှိပါ။
Friday, 22 March 2019 16:15
တစ်ပတ်ရစ် (second hand)ကားတစ်စီးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေစစ်သင့်သလဲ...?
တစ်ပတ်ရစ်ကားလောကမှာ လူကြိုက်အများဆုံးစကားကတော့ တစ်လက်ကိုင်နဲ့ မိန်းကလေးစီးနေတာဆိုတဲ့ စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Friday, 22 March 2019 15:06
ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ ကားအသုံးပြုရင် သိထားသင့်တဲ့အချက်(၉)ချက်
အဲကွန်းစနစ်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ ပြင်ပအပူချိန်နဲ့ ကားအတွင်းခန်း အပူချိန်ကို သိပ်ကွာခြားစေတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။
Thursday, 21 March 2019 15:53
ကုမ္ပဏီအမည်ပေါက် ဆိုင်ကယ်ဝှီးတက် အုံနာဘုတ်ပျောက်သော် အခွန်ပြန်ဆောင်ရပါမည်
မိမိဆိုင်ကယ်ဟာ မိမိအမည်ပေါက်မဟုတ်ဘဲ ကုမ္ပဏီအမည်ပေါက်ဆိုခဲ့ရင်ဖြင့် ဝှီးတက်နဲ့ အုံနာဘုတ်တို့ကို ပို၍ပို၍ဂရုစိုက်သိမ်းဆည်းပါ။ အခန့်မသင့်လို့ပျောက်ဆုံးသွားရင်ဖြင့် အပျောက်ပြန်လျှောက်ရုံတင်မကဘဲ မိမိအမည်ပေါက်ပြန်လုပ်စေခြင်းဖြင့် အခွန်ပါထပ်ဆောင်ရပါတယ်။
Thursday, 21 March 2019 09:39
10.1.2019 မှစလို့ သက်တမ်းတိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အပျောက်လျှောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မူလမြန်မာအက္ခရာနှင့်ဖေါင်းကြွနံပါတ်ပြားအား အပ်နှံစေပြီး အသစ်ထုတ်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာနံပါတ်ပြားမှာ ပုံပါအတိုင်း "ယ"နေရာမှာ "W" လို့ပြောင်းလဲပြီး မူလလိုင်စင်ပြုလုပ်ရာပြည်နယ်/တိုင်း အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ NPW(နေပြည်တော်) MDY(မန္တလေး) MON(မွန်) KCN(ကချင်)SHAN(ရှမ်း) စသည်ဖြင့်မြို့အတိုကောက် အင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးတွေ ဝှီးတက်တွင်မပါရှိသော်လည်း နံပါတ်ပြားမှာပါလာပါတယ်။
Tuesday, 19 March 2019 13:50
ကားတစ်စီးရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ABS ဘရိတ်စနစ်အကြောင်း
ABS ဘရိတ်စနစ်ကမကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်၊ အဲဒါဖြုတ်လို့ရမလား? ABS ဆိုတာ Auto Braking System ကိုပြောတာလား? ABS ဘရိတ်တပ်ထားရင် ဘရိတ်ရှူးတွေပိုစားတယ်ဆို? ကားလမ်းကြပ်ရင် အဲဒီဘရိတ်စနစ်က မကောင်းဘူးဆို? ABS မီးလင်းလာတာနဲ့ ဘရိတ်လုံးဝမမိတော့ဘူးဆို...စတဲ့ နားလည်မှုလွဲ၊ အမှားတွေကို သိပ္ပံနည်းကျ နားလည်ဖြေရှင်းတတ်သွားမယ်လို့ အာမခံပါတယ်။
Tuesday, 19 March 2019 11:04
လေအိတ်နဲ့ ထိုင်ခုံခါးပတ်တွေက တကယ်ပဲ အန္တရာယ်ကင်းစေလား
လေအိတ်နဲ့ ထိုင်ခုံခါးပတ်တွေက တကယ်ပဲ အန္တရာယ်ကင်းစေလား။ ဒါက တကယ်ပဲ အငြင်းပွားစရာပါ။ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ Accident တွေမှာဆိုရင် ဒီစနစ်တွေက ကိုယ့်အသက် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးမှာလား၊ ဒီဟာတွေရှိနေရုံနဲ့ အန္တရာယ်ကင်းစေမှာလား၊ ဒါတွေကရော ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပြန်ပေးမှာလားဆိုတဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒွိဟလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Tuesday, 19 March 2019 10:28
ယာဉ်​နံပတ်​ရယူ၍ ယာဉ်​စစ်​​ဆေးထားပြီး မှတ်​ပုံတင်​အခ​ငွေ မ​ပေးသွင်းသည့်​ကားများအား ဥပ​ဒေအရ​ အ​ရေးယူမည်
ကနဦးမှတ်​ပုံတင်​ထား​သော ​မော်​​တော်​ယာဉ်​အစီး​ရေ ၆,၀၀၀ နီးပါးမှာ မူ​သေယာဉ်နံပတ်များ​​ရယူ၍ ယာဉ်​စစ်​​ဆေးထားပြီး နိုင်​ငံ​တော်သို့​​ပေးသွင်းရမည့်​အခ​ငွေများ ​ပေးသွင်းရန်​ကျန်​ရှိ​နေ​သော ယာဉ်​များကို ၁ လအတွင်း မှတ်​ပုံတင်​အခ​ငွေ​များဥပ​ဒေအရ အ​ရေးယူသွားမည်ဖြစ်​​ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့​ဆောင်​​ရေး ညွှန်​ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။
Monday, 18 March 2019 14:35
Toyota VVT-i အင်ဂျင် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ
Toyota ကားတွေမှာ စက်ဖုံးကိုလှစ်လိုက်လျှင် အင်ဂျင်မှာ VVT-i ဆိုတဲ့စာလုံးတွေကို အလွယ်တကူ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ VVT-i ဆိုတာ ဘာ အဓိပ္ပာယ်လဲ။ ပြောင်းလဲနိုင်သော ဗားတိုင်မင်လို့ မြန်မာလို ဆိုကြပါစို့။
Char Tate & Brothers
Myanmar Interworld Co., Ltd.
GLS Myanmar Co., Ltd.
South Okkalapa,Yangon Region